Ny famandrihana Apple Podcasts dia manomboka amin'ny 15 Jona | Avy amin'ny mac aho
Toni Cortes | 10/06/2021 10:00 | About us
Ny "Pay per view" dia tonga amin'ny podcast. Vao avy nanambara i Apple fa amin'ny 15 Jona dia manomboka ny "serivisy" vaovao Famandrihana Apple Podcasts. Araka ny tondroin'ny anarany, manomboka amin'io andro io, ny mpamorona podcast dia hanana fahaizana manokana ny mpampiasa mivantana hampidina ny atiny.
Mametraka fotsiny ilay lampihazo i Apple. Avy any, dia izy no podcasters ireo izay hametraka raha te handoa vola ny atiny na tsia, ary hanana fahalalahana hisafidy ny mpampiasa raha toa ka mendrika ny misoratra amin'ny fantsona podcast sasany na tsia. Ny lalàna mifehy ny varotra malalaka.
The saika vao namoaka fa Apple androany dia nandefa mailaka tamin'ny mpamorona podcast nanoro hevitra ny 15 amin'ny volana Jona Ny sehatra Apple Podcasts Subscription dia hiasa ankehitriny. Manomboka amin'io andro io dia hiasa ny famandrihana podcast anao.
Tamin'ny voalohany, ity sehatra ity dia tokony ho tamin'ny volana Mey, saingy voatery nanemotra ny fandefasana i Apple noho ny olana ara-teknika. Nampanantena fanatsarana fanampiny ho an'ny Apple Podcasts ny orinasa taorian'ny olana maro karazana taorian'ny fanombohana ny iOS 14.5 amin'ny volana aprily.
Ny sehatra Apple Podcasts Subscription dia nambara voalohany tamin'ny hetsika manokana nataon'i Apple ny 20 aprily. Ity serivisy vaovao ity dia hahafahan'ny podcasters manolotra fisoratana anarana karama amin'ny seho misy anao amin'ny atiny bonus, toy ny fizarana tsy misy doka sy fizarana ho an'ny mpanjifa fotsiny, ohatra.
Na dia tsy maintsy manenjika ny paosintsika aza ny mpampiasa, (raha tiantsika), dia tsy isalasalana fa fomba iray hampiakarana ny kalitaon'ny atiny mety ho hitantsika ao Apple Podcasts. Ankehitriny ny fanamby dia ho an'ireo mpamorona atiny. Izy ireo dia tsy maintsy 'mivarotra' antsika vokatra audio izay manintona ampy hahafahantsika misoratra anarana amin'izany. Ho hitantsika eo fa mifanentana amin'ny tsena audio streaming ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny famandrihana Apple Podcasts dia manomboka amin'ny 15 Jona
Averina indray, ny 21 Jona dia Andro Iraisam-pirenena Yoga ary afaka mahazo ny medaly Apple Watch ianao
Ny tsy fahampian'ny fampisehoana Mini-LED dia nisy fiatraikany tamin'ny fanombohana ny 14 sy 16 "MacBook Pros